युरोपेली फेसन टाइकुन बनार्ड आर्नल्ट विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति - GalaxyPati
युरोपेली फेसन टाइकुन बनार्ड आर्नल्ट विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति
२०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार १६:३७
न्यूयोर्क । विश्वकै सर्वाधिक धनीहरुको सूचीमा अमेरिकाको दबदबा यसपटक तोडिएको छ । यसपटक युरोपेली फेसन टाइकुन बनार्ड आर्नल्ट विश्वकै सर्वाधिक धनी व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् ।
प्रतिष्ठित फोर्ब्स म्यागजिनले वर्ष २०२१ का संसारका धनी व्यक्तिहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । फ्रेन्च फेसन ब्रान्ड लुइस भ्यूटनका मालिक आर्नल्टले अमेजन मालिक जेफ बेजोसलाई समेत उछिन्दै सर्वाधिक धनी व्यक्ति दरिएका हुन् ।
फोब्र्सका अनुसार आर्नल्टको कूल सम्पत्ति १८६.३ बिलियन डलर छ । यो बेजोसको भन्दा ३०० मिलियन डलरले बढी हो । बेजोससँग १८६ बिलियन डलर सम्पत्ति छ । टेस्ला र स्पेस–एक्स कम्पनीका मालिक इलोन मस्क १४७.३ बिलियन डलरसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
गत मार्च २०२० मा आर्नल्टको सम्पत्ति ७६ बिलियन डलरले बढेर सोमबार बेलुका १८६.३ बिलियन डलर पुगेको हो । बितेको १४ महिनामै ११० बिलियन डलरले उनको सम्पत्ति बढेको हो । कोरोनाभाइरस महामारीमा पनि उनको कम्पनी लुइस भ्यूटनले राम्रो कमाइ गर्न सक्यो ।
तपाईको दिन आज कस्तो रहने छ ?
शिवम सिमेन्टद्वारा अक्सिजन हस्तान्तरण
गीताको अध्यात्म विज्ञान :शाश्वत सुखको प्राप्ति कसरी ? कर्म के हो?
नेपालमा ताउते आँधीको प्रभाब !
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाए अनुसार आजको मौसम ?